Soo dejisan CmapTools 6.04 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware kaleCmapTools
Bogga rasmiga ah: CmapTools
CmapTools – software awood leh in ay la shaqeeyaan jaantus iyo khariidado fikradda. CmapTools kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhisaan, share iyo qiimeyn lagu daydo aqoonta. Software ayaa awood u si toos ah loo abuuro bogagga web khariidado on server iyo iyaga oo isku mar edit la users kale online. CmapTools kooban ka mid ah foom si ay u abuuraan gooldhalinta oo kuu ogolaanaya in aad ku darto xiriir la images ama bogagga internetka. CmapTools awood u si loogu badalo mashaariicda dhameystirtay qaabab: jpeg, HTML oo PDF.
Samaynta, Iyo La shaqeeyaan jaantus iyo khariidado fikradda
Tafatirka is barbar socdaan internetka
Set A ee sanyihiin foom
Lacag mashaariic qaabab kala duwan
Soo dejisan CmapTools
Faallo ku saabsan CmapTools
CmapTools Xirfadaha la xiriira